Imithetho esi-7 yokuphucula ubuchwephesha bakho kwizixhobo eziphathwayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imigaqo elula ye-7 yefowuni yokubhala
UJorge Neira | | Imithombo, Izibonelelo
Ezi zi Imigaqo elula eyi-7 onokuyisebenzisa xa usebenzisa uhlobo oluthile lwefonti kwiprojekthi yakho okanye kwiprojekthi yomthengi kwaye ukuze ibonwe ngokugqibeleleyo kwifowuni ephathekayo.
1 Nika isithuba
2 Fumana imilinganiselo
3 Khulula kwaye uqinise
4 Fumana indawo emnandi
5 Musa ukulahlekelwa ngumdaka
6 Nciphisa umahluko
7 Lungisa umkhondo kwisikali
Kukho ulawulo olongezelelweyo oluchaphazela ukuhamba komgca okanye umhlathi kwaye umalunga ne- Ulawulo lwemihlabaNgamanye amagama, isithuba esiphakathi koonobumba sincinci kunesithuba esiphakathi kwamagama kunye nesithuba esiphakathi kwamagama sincinci kunesithuba esiphakathi kwemigca. Ukufumana ukufundeka okugqibeleleyo kwiselfowuni, kuya kufuneka unikele ingqalelo kulawulo lwendawo, Ukongeza kwisitayile sabalinganiswa kwi amagama, imigca nemihlathi, ebaluleke ngakumbi ekukhanyeni kwendalo.
Ngokwesiqhelo, umlinganiso wokufunda kakuhle umalunga Iimpawu ezili-65. Ubude bomzimba balo mlinganiselo ihlala ixhomekeke kuyilo lohlobo lochwethezo kunye nokulandelela, kunye nesicatshulwa osisebenzisayo. Kuyamangalisa ukuba oonobumba abangama-65 bandisiwe ukuya emaphethelweni webrawuza yedesktop, nangona kunjalo, phantse kuzo zonke iimobile ezihambisa aba bantu zihlala zandisa ngaphaya kwemida, ke kuyimfuneko ukunciphisa umlinganiso.
Khulula kwaye uqinise
Ukuba zenziwe ngokukhululekileyo, izithuba phakathi kwamagama ziqala ukudibana, ethi ibangele ukuba kubizwe ngokuqhelekileyo "imilambo".
Umgangatho wesiko lokubeka esweni umalunga ne-1.4em, nangona kukholelwa ukuba oku kuqine kakhulu kwizikrini, uphawu oluphambili lweefonti ezisebenza ngokufanelekileyo kwizikrini ziikhawuntari ezinkulu, ezithi bafuna indawo ethe kratya ukugcina ulawulo lwendawo.
Fumana indawo emnandi
Umthombo ngamnye ubuncinci unendawo enye emnandi, ethi Yindibaniselwano yesayizi ezihlala ziveliswa ngcono kwiscreen, kwaye ukusuka kwindawo apho okungadibananga nokuthethathethana isetyenziselwe isikhangeli esihlala sigqwetha uhlobo loyilo ngokuncinci kangangoko.
El Indawo emnandi, phantse yindawo apho uninzi lweemivimbo zivame ukulungelelanisa negridi yepikseli. Ngokubanzi, indlela esemgangathweni yabaqulunqi kukubeka uhlobo lomthombo usebenzisa igridi yesiseko, nangona kunjalo xa kuziwa kwimobile oyifunayo sebenzisa ubude "X" endaweni yoko, ikwangoko ukuphakama koonobumba abancinci x.
Musa ukulahlekelwa ngumdaka
Idlavu, ngokusisiseko umda webhokisi yokubhaliweyo; ngokubanzi oko sikufundayo kulungelelaniswe ngasekhohlo kubangela ukuba umda wasekunene ungalingani. Nje ukuba amehlo atsibe ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye emgceni othile, ingqondo inethuba lokugweba ngcono i i-engile kunye nomgama wokutsiba okulandelayo, ukuba konke ukutsiba kwenziwe ngokungaguquguqukiyo kwaye ngokukhawuleza okukhulu ukuba babekwe ngendlela efanayo. Kungenxa yoko le nto umda wasekhohlo wokubhaliweyo uhlala ucabalele, usenza yonke imigca iqale endaweni enye.
Xa usebenzisa i Isicatshulwa esifanelekileyo Izikhewu ezingahambelaniyo zihlala zenziwa. Ingxaki ephambili kwizicatshulwa ezichanekileyo kukuba basebenzise ubude obufutshane kakhulu, obangela ukuba isicatshulwa singafundeki kwiifowuni eziphathwayo.
Izihloko banokuba ngama-2 kunye namaxesha ama-3 ubukhulu bomzimba wombhalo wakho yenzelwe iidesktops, esebenza kuba kuninzi kakhulu okubhaliweyo ngaphakathi kwescreen. Nangona kunjalo, xa kuziwa kwiselfowuni, ayisiyiyo yonke into ebonakalayo ebonakalayo kwaye Umahluko uthanda ukubaxwa kakhulu.
Lungisa umkhondo kwisikali
Xa uhlengahlengisa ubungakanani befonti kwiselfowuni, kufuneka zithathele ingqalelo utshintsho olufunekayo ekulandeleleni, osisiseko sokushiya iileta sisetyenziswe kumlinganiswa ngamnye kwifonti.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imigaqo elula ye-7 yefowuni yokubhala
Amaqhinga e-Photoshop aya kukunceda ukulungisa iziphene kwiifoto zakho